Xildhibaan Zakariye”Baarlamaanku Waa In Warqad Codsi Ah U Qoraa Itoobiya, Si Loo Soo Celiyo Qalbi Dhagax” | jubbaland news
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji oo ka mid ah mudanayaasha Golaha Shacabka ayaa si aad ah uga hadlay qadiyadda la xariirta dhiibista Cabdikariin Sheekh Muuse “Qalbi Dhagax” oo ay xukuumadda Soomaaliya u gacan galisay Dowladda Itoobiya.
Waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in Baarlamaanka Soomaaliya uu Warqad Codsi ah u qoro dowladda Itoobiya, taas oo lagu dalbanayo in la soo celiyo Muwaadinkaasi Soomaaliyeed.
Sidoo kale Xildhibaan Zakariye ayaa hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in laga baaran dago arrimahan, isaga oo soo jeediyay in la sameeyo Sharci Muwaadiniinta Soomaaliyeed ka hor istaagayo in loo gacan geliyo dowlado Shisheeye.
Waxaana uu shaaca ka qaaday in Qof kasto oo Soomaali ah xaq u leeyahay Dalka in si xor ah uu ugu noolaado.
Hadalka Xildhibaankan ayaa ku soo aadaya, xilli shalay Baarlamaanka Soomaaliya ay sharci darro ku tilmaameen dhiibistii Cabdikariin Qalbi Dhagax, kaas oo bishii August ee Sanadkan loo gacan galiyay Dowladda Itoobiya.